Fidiran’ny tanora amin’ny sehatry ny asa Tena sarotra eto Madagasikara
Fahefana mpanao lalàna Mahasolotena ny depiote ny senatera
Mihetsiketsika ny birao maharitra eo anivon`ny Antenimieram-pirenena amin`ny fanitarana fe-potoana farany hiasan`ireo depiote voafidim-bahoaka. Mazava anefa ny lalàna fa tapitra ao anatin`ny dimy taona ny fe-potoana hiasan`ny solombavambahoaka.
Federasionan’ny mpivarotra sy ny indostria Miandrandra fitoniana
Manantena fitoniana ara-politika sy fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharahana ny federasionina ny antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara, izay miisa 24.
Fitsarana eto Madagasikara Maro ireo rafitra mampandringa azy
Ny 19 janoary ho avy izao no hanao fianianana ampahibemaso eny amin’ny kianjan’i Mahamasina ny filoham-pirenena vaovao ka aorian’izay no hijoro ny governemanta vaovao.
ENMG Hanatsara ny fampidirana ny mpiadina
Nisy ezaka teo anivon’ny Fitsarana nandritra ny enim-bolana faharoa tamin’ny taona 2018 nataon’ny minisitry ny fitsarana entina hamerenana ny hasin’ny fitsarana eto Madagasikara.
Harena azo amin’ny tsy ara-drariny Hisedra olana ireo banky Malagasy
Nanao fanambarana ny teo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) fa tsy feno ny fepetra hanatanterahana fifidianana solombavambahoaka amin’ny 20 martsa izao.
Fikambanana RNDC Miandry ny fampiharana ny lalàna mikasika ny zon’ny mpanjifa
Miandry ny fampiharana ny lalàna mikasika ny zon’ny mpanjifa amin’ny filoham-pirenena vaovao izahay, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa na RNDC, Lita Rabetsara na Ralita.
Fananganana orinasa eto Madagasikara Hiroborobo amin’izay ?
Faha-167 amin’ny 188 ny laharan’i Madagasikara amin’ny lafiny fandraharahana. Rariny raha miaina tanteraka anaty fahantrana ara-toekarena ny firenena.
Nampahafantarina tetsy amin’ny Live Hotel Andavamamba omaly zoma 26 oktobra ny fisian’ny hetsika arak’asa “Forum des métiers” andiany faha-9 hiarahan’ny SOS Villages d’enfants sy ireo mpiara-miombon’antoka maro tahaka ny DHL sy ny Allianz ary ny Banky BNI Madagasikara.
Hetsika tanterahina mandritra ny 2 andro ary misy hatrany ireo mampiavaka azy oharina amin’ny andiany teo aloha. Tamin’ity indray mitoraka ity dia novelabelarina bebe kokoa ny atao hoe YouthCan sy YouthLinks izay vovonana hampiroboroboana ny fahaiza-manao amin’ny fanomezana asa haingana ireo tanora amin’ny alalan’ny fiarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny fikirakirana ny aterineto. Tsiahivina fa ny fikambanana SOS Villages d’enfants dia mandray sy manabe ny tanora kamboty sy tsy misy mpiahy ka tezaina sy tantanana mandrapahitany asa na koa tohanana sy ampiana ny fianakaviana ao anatin’ny fotoana fohy amin’ny alalan’ny fanomezana fitaovana hahatafitana ny zanaka. Tanjona amin’ity hetsika ity ny hanamorana ny fahaleovantena sy ny fidiran’ny tanora amin’ny sehatry ny asa ka ahafahan’izy ireo mivelatra sy mahalala ny asa sy ny orinasa misy rehetra eto Madagasikara manoloana ny fianarana izay nataony. Eo ihany koa ny fanenana ny elanelana misy amin’ny fianarana rantovina eny an-tsekoly sy ireo asa rehetra misy eto Madagasikara. 200 eo ho eo amin’izao fotoana ireo tanora mieritreritra hanangana ny orinasany ary 600 ny tanora liana amin’ny asa misy noho ny fisian’ity hetsika ity.